2NH4MAYA3 + Ba (OH)2 → Ba (MAYA3)2 + 2H2O + 2NH3
amooniyam amooniyam barium hydroxide amooniyam biyaha ammonia
(kh) (rnn) (kt) (lng) (kh)
(trung) (trung) (xoog leh) (jacayl, daacadnimo)
2 1 1 2 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2NH4MAYA3 + Ba (OH)2 → Ba (MAYA3)2 + 2H2O + 2NH3
Waa maxay xaalada falcelinta ee NH4NO3 (ammonium nitrate) ay kaga falceliso Ba(OH)2 (barium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Ba(NO3)2 (barium nitrate) iyo H2O (biyaha) iyo NH3 (ammonia)?
Ba (OH) 2 wuxuu la falgalaa NH4NO3
Dhacdada ka dib NH4NO3 (ammonium nitrate) waxay la falgashaa Ba(OH)2 (barium hydroxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2NH4MAYA3 + Ba (OH)2 → Ba (MAYA3)2 + 2H2O + 2NH3
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Ba(NO3)2 (barium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba (NO3)2 (barium nitrate) sida badeecad ahaan?
sodium hydroxide chloride ammonium biyaha chloride sodium ammonia
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NaOH + NH4Cl → H2O + NaCl + NH3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NaOH (sodium hydroxide) ay kaga falceliso NH4Cl (ammonium chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NaCl (sodium chloride) iyo NH3 (ammonia)?
Dhacdada ka dib NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa NH4Cl (ammonium chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NaOH + NH4Cl → H2O + NaCl + NH3
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH3 (ammonium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
(NS4)2CO3 + Ba (OH)2 → 2H2O + 2NH3 + BaCO3
barium hydroxide biyaha ammonia kaarboon kaarboon
(kh) (dd) (lng) (kh) (kt)
1 1 2 2 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta (NH4)2CO3 + Ba (OH)2 H 2H2O + 2NH3 + BaCO3
Waa maxay xaalada falcelinta (NH4) 2CO3 () kaga falcelisa Ba(OH)2 (barium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NH3 (ammonia) iyo BaCO3 (barium carbonate)?
(NH4) 2CO3 waxay la falgashaa Ba (OH) 2
Dhacdada ka dib (NH4) 2CO3 () waxay la falgashaa Ba(OH)2 (barium hydroxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada (NH4)2CO3 + Ba (OH)2 H 2H2O + 2NH3 + BaCO3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta (NH4)2CO3 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (NH4)2CO3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (NH4)2CO3 () falcelin ahaan?
2NaOH + [Cu (NH3)4] Cl2 → Cu (OH)2 + 2NaCl + NH3
sodium hydroxide naxaas (ii) hydroxide chloride sodium ammonia
(digo yara) (bt) (digo yara) (rnn) (kh)
(xan) (xanh lam) (xoog leh) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2NaOH + [Cu (NH3)4] Cl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl + NH3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa [Cu(NH3)4]Cl2 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cu (OH) 2 (copper(ii) hydroxide) iyo NaCl (sodium chloride) iyo NH3 (ammonia)?
Dhacdada ka dib NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa [Cu(NH3)4] Cl2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2NaOH + [Cu (NH3)4] Cl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl + NH3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta [Cu(NH3)4]Cl2 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee [Cu(NH3)4]Cl2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh [Cu(NH3)4] Cl2 () falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cu(OH)2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu(OH)2 (naxaasta(ii) hydroxide) badeecad ahaan?
KNO3 + 7 KOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4K2ZnO2
amooniyam haadi potassium hydroxide zinc biyaha ammonia Kalibaaliatka zincate
(trung) (xanh trắng) (xoog leh) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta KNO3 + 7 KOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4K2ZnO2
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada KNO3 + 7 KOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4K2ZnO2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta K2ZnO2 (Potassium zincate)
What are the chemical and physical characteristic of K2ZnO2 (zinc)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2ZnO2 (potassium zincate) alaab ahaan?